आजको राशिफल: मिति २०७६ साल कात्तिक २६ गते पूर्णिमा तिथि मंगलबार - Internet Khabar
Home Rashifal आजको राशिफल: मिति २०७६ साल कात्तिक २६ गते पूर्णिमा तिथि मंगलबार
आज वि.सं. २०७६ कात्तिक २६ गते मंगलबार तदनुसार इ.स. २०१९ नोभेम्बर १२, कार्तिक शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि।प्रस्तुत छ आजको राशिफल:
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अरूको मात्र भरपर्दा काम अधुरो रहनेछ। आत्मविश्वासको कमीले पछि परिए पनि बुद्धिको उपयोगले काम बन्न सक्छ। ढिलै भए पनि योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। कामको सन्दर्भमा आफ्नैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। काम दोहोर्याउनुपरे पनि अन्तत: फाइदै हुनेछ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। आकर्षक उपहार प्राप्त हुन सक्छ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। अर्थअभाव खट्किनाले काममा बाधा आउन सक्छ। फाइदाका पछि लाग्दा समस्या आउन सक्छन्। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो परिश्रमको फल प्राप्त हुने समय छ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने मौका छ। व्यापार तथा साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ईर्ष्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन् भने अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। सानातिना काममै अल्झनुपर्नेछ भने पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन्। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या होला।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय छ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ गर्न सक्छ। भेटघाटले महत्वपूर्ण कामको जग बसाउने अवसर दिलाउनेछ। मिहिनेत गर्दा सम्मानित स्थान प्राप्त हुन सक्छ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले केही काम बनाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा भैपरी आउने समस्या सुल्झनेछन्। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। तर, गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। आस मारेको काम तत्काल सम्पादन नभए पनि पछिका लागि सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त हुनेछन्।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ।व्यवसायले रमाइलो यात्रा गराउन सक्छ। काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ। धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ भने जीवनशैली आनन्दमय रहनेछ। प्रियभेट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त होला। सोखले मालमत्ता जुटाउन प्रेरित गर्नेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे काममा सोचेको फाइदा उठाउन नसकिएला। प्रतिस्पर्धी बढ्नाले समस्या थपिएलान्। चिताएका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ला। फजुल खर्चका साथै ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनुहोला।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। स्वास्थ्य-चिन्ताले सताउला। अध्ययनमा बाधा हुनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। तापनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्न समय प्रतीक्षा गर्नुहोला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिन सक्छन्।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। लेनदेन तथा हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला। सहयोगीहरूले हात झिक्नाले समस्यामा परिनेछ। सञ्चित रकम खर्चनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। पारिवारिक असमझदारीले पनि काममा केही अप्ठ्यारो पर्ला। दिगो काम प्रारम्भ गर्न केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ।
Previous articleसीमा स्तम्भ अनुगमन गर्नै मुश्किल !
Next articleझापालाई कृषिमा ‘मिनी इजराइल’ बनाउने सपना